Igumbi le-Air Conditioned kwindawo yokuphumla kwilali
Indawo yokuphumla yelali eKanadukathan, ilali yelifa. Kukho amagumbi ayi-8 anomoya oneebhedi ezimbini okanye ezingamawele.
Amagumbi ayilwe njengamakhaya kwiilali zaseChettinad.
Iithayile ze-Attangudi ezenziwe ngesandla zisetyenziselwe ukubeka umgangatho kwaye ifenitshala ekwigumbi iyafana naleyo isetyenziswa kumakhaya akule ngingqi. Amagumbi ane-air conditioner kunye nefeni. Izindlu zangasese zezangoku zineshawari enamanzi ashushu nabandayo.
Izixhobo zokudaya iinwele kunye nabenzi beti/kofu ziyafumaneka xa uzicelile.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ifumaneka ngokulinganayo malunga neeyure ezi-1 ½ ukusuka eTanjore, eMadurai naseTrichy. Kwaye malunga neekhilomitha ezi-3 ukusuka kuhola wendlela iTanjore – Madurai ngokunjalo nohola wendlela iTrichy – Rameswaram. Indawo yokuphumla ijikelezwe ziindlu ezinkulu.
Iindwendwe zinokufikelela kuninzi lwezibonelelo zeChettinad Mansion edumileyo, imizuzu emi-5 nje yokuhamba.
Iindwendwe zinokundwendwela iTempile yePillayarpatti, iTempile yaseKundrakudi (zombini malunga nemizuzu eyi-10. Ukuqhuba) kwaye wenze uhambo losuku ukuya eRameshwaram (olumalunga neeyure ze-3 zokuqhuba).